Lalao mahafatifaty sy mampiankin-doha: Androany, Rushfight, tandremo sao voafandrika ianao! | Androidsis
Lalao mahafatifaty sy mampiankin-doha: Androany, Rushfight, tandremo sao voafandrika ianao!
Androany izahay dia mandefa fizarana izay tiako hiantso tsotra Lalao mahafinaritra sy mampiankin-doha. Amin'ity lahatsoratra voalohany ity dia hanolotra sy hanoro hevitra a Lalao arcade tsotra an'ny daka sy totohondry Mansalva, izay tokony hampitandremako anao fa, na dia eo aza ny fanamorana ny fampiasana ny toetra amam-panahy sy ny fibaikoana lalao tsotra, dia lalao iray izay raha vantany vao manandrana azy ianao dia ho voatsindrona eo noho eo, ka tsy ho azonao. ajanony ny filalaovana fotoana firy amin'ny fotoana anananao kely.
Lalao izay premieres ity fizarana vaovao amin'ny fomba mendrika tanteraka satria ankoatry ny a lalao mampiankin-doha indrindra fa mbola tsy afaka nahita koa aho Ity dia lalao mety indrindra hilalaovana amin'ireo fotoana malalaka ananantsika izay ananantsika mandritra ny andro satria tsy maharitra roa minitra akory vao manandrana sy mandresy ny marika teo alohanay.
Hanombohana azy ireo hilaza izany lalao tsara tarehy sy mampiankin-doha Tena miresaka tsara aho, dia lalao iray avy amin'ny developer Flippy Hills ihany, lalao iray mampiankin-doha sy tany am-boalohany na dia misy lohahevitra na rafitra lalao hafa tanteraka amin'ity lalao ity aza.
Lalao izay azonao sintonina maimaim-poana, na dia misy fividianana fampiharana sy dokambarotra tafiditra aza, ny lalao resahina dia mamaly ny anaran'i Rush Fight Ary azo alaina ao amin'ny Play Store an'ny Google ihany io, izay fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android ary manome antoka sy fahatokisana tanteraka na dia maro aza no milaza zavatra hafa.
Sintomy Rush Fight maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Ny lalao mihitsy dia mora lalaovina ka na ny zaza efa roa taona aza dia afaka manao azy tsara. Voafetra ihany ny mikasika ny ankavia na ankavanan'ny efijery amin'ny terminal Android antsika ka mihodina ilay tarehin-tsoratra ary mandresy ilay mpanafika akaiky azy indrindra.
Na dia ny lalao amin'ny tsotra indrindra azontsika atao aza ny manatrika ny tarehiny, ity iray ity dia tapaka hatramin'ny farany mila manana fifantohana faran'izay betsaka sy hafainganam-pandeha farany ianao raha tsindrio ny toerana mety, havia na havanana, alohan'ny handondanan'ny mpanafika anao.
Lalao izay mampatsiahy betsaka ahy Ny tolona masiaka nataon'i Neo amin'ireo replicaants an'ny Agent Smith amin'ny iray amin'ireo ampahany amin'ilay trilogy angano The Matrix, ity farafaharatsiny momba ity tontolo voalohany na ambaratonga natolotra antsika ity tsy voasokatra miaraka amin'ny toetrantsika voalohany.
Mazava ho azy lalao tsotra hilalaovana fa tsy mora, lalao izay tsy mitaky fotoana firy hilalao lalao vitsivitsy ary ny momba azy dia ny fahazoana vola madinika hahafahana mividy fitaovam-piadiana vaovao, na ny tena zava-dehibe indrindra, hahafahana mividy endri-tsoratra vaovao miaraka amin'ny vaovao sy hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha haingana.
Rush Fight no lalao Arcade mahazatra izay mampatsiahy antsika vanim-potoana hafaAmin'ny fotoana ahazoako antoka fa nandany ny karamanay isan-kerinandro izahay nanipy vola 25 pesetas hanandrana handresy ny naotinay na ny naotin'ny mpilalao izay mitana ny laharan'ny lalao. Ary voninahitra lehibe ny hita taratra teo amin'ny laharana voalohany amin'ny filaharan'ny mpilalao ao amin'ny lalao, na dia tsy misy olona afaka manavaka antsika aza satria amin'ny ankapobeny dia tsy nahazo nametraka endri-tsoratra telo farafaharatsiny izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao mahafatifaty sy mampiankin-doha: Androany, Rushfight, tandremo sao voafandrika ianao!
Ny Echo Amazon vaovao dia ho tonga alohan'ny faran'ny taona miaraka amin'ny fanatsarana maro